HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 10-JANUARY-2021
Sunday January 10, 2021 - 10:25:00 in Wararka by Mogadishu Times
DFS oo ku dhawaaqday in cidna loo hakin eyn doorashooyin lana qabanaayo
R/Wasaaraha XFSMd.Maxamed Xuseen Ro oble oo kulan la qaatay Mada xweyneyaasha D/ G/yada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorq oor, K/ Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Hirshabeelle Cali Gu udlaawe Xus een iyo G/G/Banaadir ahna duqa Muqdisho Cu mar Maxamu ud Max amed Finish, ayaa ku dhawa aqay in Xuku umaddu ay go’aan sa tay in la guda ga lo hirgelinta doorashooy inka, si aan wakhti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed.
War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska R/ Wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in R/W asaaraha uu soo bandhigay dadaalkii uu ku bi xiyay sidii loo xallin lahaa kala aragti duwanaa shaha ku saabsan arrimaha doo rashooyinka ee ay qabeen qaar kamid ah D/Goboleedyada & siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
"Waxaan marar badan ku celceliyay inay alb aabadaydu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta, aanna diyaar u ahay had iyo jeer inaan ti xge liyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulin ta heshiiskii doorashooyinka iyo habraacyadii lagu heshiiyay.”
R/Wasaare Rooble ayaa tilmaamay in Sha cabka Somaliyeed ay Shalay sugayaan in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaq iijyeen san adihii lasoo dhaafay, si taas looga gu ul gaaro waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyadeed loo sii adkeyn lahaa.
Madaxweynaha D/G/Galmudug Md.Axmed Ca bdi Kaariye Qo orqoor oo isna ka hadlay shirka jaraa’id ayaa yiri” Waxaan rabaa inaan ha lkaan ka caddeeyo in wali aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibad ayda Puntland iyo Jubal and dhexdhexaadintii aan halkan u imid iyo nati ija dii wanaagsanayd iyo tanaasulkii ay ii muuji yeen Madaxda Qaranka”.
Ugu danbeyntii, R/Wasaaraha XFS ayaa ugu baaqay dhammaan shac abka iyo masuuliyiinta Soomaaliyeed in wadajir looga shaqeeyo sidii loo ga fogaan lahaa waxkasta oo caqabad ku ah fulinta heshiiskii doorashoo yinka ee lagu ga aray M/Muqdisho 17kii Sebteembar 2020, kaas oo aasa-as u ah qabsoomida doorashooyinka & si ambaqaadidda hannaanka di muqraadiyade ed ee dalka.
Wasiirka Amniga XFS oo carruurta Agoonta Boliiska Soomaaliyeed u fulinaya ballan-qaad uu u sameeyay.
Wasiirka Amniga gudaha XFS Md.Xasan Xu ndubey Jimcaale oo ka qeyb galay munaasaba dda 77 guuradii kasoo wareegtay aas aaska ciida nka boliiska Soomaaliyeed, ayaa sheegay in gu ulo taariikhi ah ay ka gaareen ilaalinta nabad gelyada ciidam ada qalabka sida gaar ahaan kuwa boliiska.
Wasiirka ayaa saraakiisha u dalacday darajoo yinka sarsare ku ammaanay dadaalka ay muuji yeen iyo sidii loo sugay amniga garoonka Inj-Yariisow (Ex Koonis) oo marti geli yay ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee lagu qabto bariga Afrika.
Wasiirka Amniga gudaha oo ku dheeraaday ka hadalka muhii mada ay leedahay ilaalinta amniga shacabka ay aa xusay in ciidanku ay hureen wa xa ugu qiimaha badan adduunka oo ah nafta isa goo tilmaamay iney yihiin geesiyaal aan la iloob eyn. "Shaqo la qabto tan ugu karaama badan oo adduun iyo aakhiro ugu wanaagsan waa um madaada amnigeeda in la sugo”ayuu yiri wasiirka Amniga. Wasiirka Amniga gudaha Md. Xasan Xu ndubey ayaa boggaadiyay agoonta boliiska oo wacdaro ka dhigay munaasabadda isagoo sheeg ay inuu garab taaganyahay qorshayaal cusub oo lagu horumariyana uu la imaa doono.
"Waxaan ku faraxsanahay agoontu meeshi ugu horreysay oon booqdo iney tahay, ballan qaad ba an ka galay inaan fuliyo Ayaan rabaa insha allah ,waxaa kaloo qorshaha iigu jira inaan wax cusub ku kordhino ubaxyadaas soo koraya si dadki u dhi ntay dalkaan dadki ay ka tageen aysan u dayac min” ayuu yiri Xundubey.
Wasiirka Xasan Xundubey ayaa sheegay in argagixisada Alshabaab aysan dooneyn wax horumar ah, isagoo tusaale u soo qaatay in qori la gu waardiyeynayo dhisida waddada isku xirta Mu qdisho iyo Afgooye taas oo aan siyaasad ku lug laheyn, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ka co dsaday in lala shaqeeyo ciidamada Qalabka sida si dalka looga sifeeyo argagixisada.
CBS ayaa waxaa la aas-aasay sannadkii 1943-kii waana ciidanka ugu da’da weyn ciidamada qal abka sida.
Mucaaradka oo ka falceliyay hadalkii xukuum adda ee hirgelinta doorashada
Qaar kamid ah musharixiinta Soomaaliya ayaa ka falceliyay go'aankii Shalay kasoo baxay XFS iyo qaar kamid ahy maamul goboleedyada iyo G/Banaadir ee ahaa in la qabanayo doorashooyin ka dalka.
Afhayeenka Midowga Musharrixiinta mucaa radka,Ridwaan Xirsi Maxamed, oo ah muasharr ax madaxweyne ayaa BBC-da u sheegay in had alka xukuumadda uu yahay hadal lama filaan ah.
Md.Ridwan ayaa sheegay in 3 mar uu madaxweynaha Galmud ug dalbaday in uu ka odayeeyo khilaafka la xiri ira doorashada, waxayna tu saale usoo qaateen shir ay madaxweyne Qoor qo or kula yeesheen Garo we oo ay sheegeen in hal kii ay ka warsugayeen madaxweynaha Galmudug ay ka war heleen had alka xukuumadda Shalay kasoo yeeray.
"Garoowe intii aynu joognay, waxaa inoo soo baxday in arrimaha la isku hayo ay yihiin arrinta Somaliland, xubnaha guddiga doorashada ee dhi naca dowladda u janjeera iyo arrinta Gedo, waxa an ka wada hadalnay sidii tabashooyinkaas loo xallin lahaa, madaxweynaha Galmudug na waxaa uu dalbaday 3 oo uu Muqdisho kula kulmayo mad axda qaranka, si uu jawaab ugu keeno, iyadoo ja waabta la sugayo waxaa la yaab noqotay inay shir jaraa'id qabtaan oo ay yirahdaan madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa jawaab laga waay ay", ayuu yiri Ridwaan Xirsi.
Waxaa kale oo uu sheegay in dowladda ay ku adkeysato arrimaha walaaca laga qabo ay tahay arrin aad iyo aad looga xumaado, ilaa iyo iminka na aanay wax jawaab ah ka helin madaxweyne Qoorqoor iyo Mahdi Guuleyd oo uu sheegay inay Garowe ku wada hadleen. Hadalka mucaaradka ayaa kusoo aaday saac ado un kadib markii DFS ay sheegtay inay go'aa nsatay hirgelinta doora shooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan.
Doorashooyinkan oo wali uu muran ka taagan yahay ayaa XFS waxay sheegtay in iyada iyo qa ar ka mid ah maamul gobaleedyada ay arrintaas isla garteen.
War qoraal ah oo goor sii horreysay ka soo ba xay xafiiska R/wasaaraha XFS,Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in R/wasaaraha uu ku lan la qaatay Madaxweyneyaasha D/G/yada Gal mudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, K/Galbe ed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Hir shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo G/G/Ban aadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Ma xamed Filnsh, ayna isla garteen oo ay go'aansa deen in la guda galo hirgelinta doorashooyinka, si aan wakhti kale looga lumin shacabka Somaliyed.
Sidoo kale shir jaraa'id oo ay si wadajir u qab teen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaa sha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabee lle, K/Galbeed iyo G/Banaadir ayaa R/wasaaraha XFS waxaa uu sheegay in safarradii uu ku tegay qaar kamid ah gobolada dalka ay ahayd sidii loo xallin lahaa tabashooyinka ay qabaan qaar kamid ah maamul goboleedyada.
"Socdaallaadii aan ku tegay maamulada K/Gal beed, Puntland iyo Galmudug waxay qeyb ka ah aayeen dedaaladii aan ku doonayay in dalka doo rasho loo jaheeyo, wixii tabasha ahna si xilkasni ma leh looga wada xaajoodo, si taas looga guul gaaro, XFS waxay go'aansatay in lagu guda galo hirgelinta doorashooyinka, si aan wakhti kale loo ga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana foga ado wax alle wixii carqaladeyn kara fullinta heshi iskii doorashooyinka ee lagu gaaray M/Muqdisho sanadkii 2020-ka", ayuu yiri R/W Roble.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay madaxw eynaha Galmudug oo sheegay in markii uu dha waan tegay Garowe madaxda maamullada Punt land & Jubaland ay ka aqbaleen dhexdh xaadin.
"Waxay isoo dhiibeen qoddobo 3 ah oo ay ka dal banayaan madaxda DFS inay fulliyaan, si loo soo afjaro tabshooyinka ay ka qabaan arrimaha door ashooyinka, kadib waxaa shir la galay madaxwe yne Farmaajo &R/wasaare Roble, intaas kadib waxaan dib ugu celiyay madaxweynayaasha Pun tland iyo Jubaland go'aanka madaxda federalka ee doorashooyinka, si halka hadda la taagan yah ay looga dhaqaaqo, dalkana ay uga dhacdo doo rasho heshiis lagu wada yahay oo wkahtigeeda ku qabsoonto, waxaan rabaa in aan halkaan ku caddeeyo in wali wax jawaab ah aysan kasoo no qonin saaxiibadey, madaxda Jubaland iyo Puntl and iyo dhinacyadii kale", ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor.
Ilaa iyo hadda ma kala cadda waxa uu ka dhi gan yahay go'aanka dowladda iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada oo doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho aysan qeyb ka ahayn maam ulada Jubaland iyo Puntland, sidoo kale ay salu ugsan yihiin dhamana musharrixinta mucaaradka.
Dhanka kale wax war ah oo arrintaan la xiriira wali kama soo bixin maamul goboleedyada Punt land, Jubaland iyo siyaasiyiinta kale ee u hanqal taagaya xilka madaxtinimada Soomaaliya oo in badan oo kamid ah wax ka tabanayay hannaanka
doorashooyinka loo marayo
FAROOLE oo hal arrin uga digay maamulada la safan DF
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland, Md.Cabdiraxmaan Faroole oo haatan ah Sena tor ka tirsan Golaha Aqalka Sare ayaa ka hadl ay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan dooda weli ka taagan doorashooyinka dalka.
Md.Faroole ayaa ugu horreyn sheegay in do wladda dhexe looga baahan yahay in doorasha da aysan xilligeeda kadib marin, si looga baaqs ado qalalaase hor leh oo yimaada.
Senator Cabdiraxmaan Faroole ayaa sidoo kale kula taliyey madaxda K/Galbeed& Hir Sha belle in aysan noqon kuwa loo taliyo, balse ay qaadaan waddada saxda ah, si loo bad-baadiyo dalka, la’iskuna soo dhoweeyo dhinacyada isku haya doorashooyinka.
"Madaxweynayaasha K/Galbeed &HirSha belle waxaan ku waaninayaa inaysan noqon dad loo taliyo,” ayuu yiri Mr. Faroole.
Sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday inuu u ga digayo Galmudug, K/Galbeed &HirShabelle in dowladda dhexe ay u boobaan kuraasta xildhi baanada baarlamaanka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo uu weli is mari-waa ka taagan yahay doorashooyin ka dalka ee 2021-ka oo ay isku hayaan dowlad da federaalka ah ee Soom aaliya, musharraxiin ta mucaaradka, maamullad a Jubbaland iyo Pun tland.
Shaqlaha Rayidka Punland oo mushaarka loo kordhiyay
Madaxtooyada D/Goboleedka Puntland waxaa Habeen hore lagu qabtay munaasadda xuska 8-da January oo ku beegan sanad guur adii 2ad ee ka soo wareegatay markii la doortay Madax weynaha iyo Madaxweyne Ku-xi geenka maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Md.Siciid C/hi Deni & Madaxweyne Ku-xigeenka D/G/Puntland Md.Axmed Cilmi Cisma an Kara ash oo ay weheliyaaan Guddoonka G/Wakiilada ay aa munaasab adda […]
Ciiidamada Danab Oo Burburiyay Fariisimo Al-shabaab Ay Ku Lahayeen G/Sh/Hoose
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay ka soo baxayaan howl-gallo qor sheysan oo saacadihii la soo dhaafay ciidamada Danabay ka fuliyeen deegaano hoostagaG/Sh/Hoose.
Howl-galladaan ay ciidamada Danab Samee yeena ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka Tooratoorow, waxaana lagu soo warramayaa in la la beegsaday goobo ay ku sugnaayeen daga alyahanada Al-Shabaab.
G/le Axmed C/hi Nuur (Beer-yare) oo ah taliy aha ururka 16-aad ee kum aandooska Danab ayaa sheegay in howl-galladaasi ay ku burburiy een gaari lagu diyaarinayey walxaha qarxa, ka as oo uu tilmaamay in lagu dhib aateyn rabay shacabka. Sidoo kale G/le Beer-yare ayaa inta asi ku sii daray Hadalkiisa in ay nolosha ku soo qabteen 3 ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo diy aarinayey qaraxaasi, sida uu hadalka u dhigay.
Taliyaha ayaa xusay inay sii wadi doonaan dha q-dhaqaaqyada ay ka wadaan G/Sh/Hoose oo ay weli ku xoogan tahay kooxda Al-Shabaab.
Si kastaba Maalmihii u dambeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa sare u qaad ay howl-gallada ay ka wadaan koonfurta & bar tama ha Soomaaliya.
DF oo beenisay warar looga faafiyay baraha bulshadaDowladda Somaliya ayaa beenisay warar ma almahii lasoo dhaafay looga faafiyay baraha bu lshada, kuwaas oo sheeg ayay iney shirkado ajnabi ah la gala yaan heshiis shidaal qodisah.
Wararka horay loo faafiyay wa xey she egeen in laba shirka dood ma’suuliyii ntooda ay soo gaareen magaalada Muqdisho si ay heshiis ula galaan dowladda Soomaaliya, 2da shirkad ayaa lagu kala sheegay Liberty Pet roleum iyo Coast line Exploration oo horay loo oran jiray SOMA OIl & GAS.
Wasiirka W/Maaliyadda XFS Md.Cabdiraxma an Ducaale Beyle ayaa sheegay in aysan jirin xil ligaan shirkado heshiis shidaal qodis lala saxii xday, sidoo kalena lala saxiixanayo.
Wasiirka oo shir ajraaíd warbaahinta kula had lay ayaa sheegay in masuuliyiin ka socda shirka daha ay yimaadeen M/Muqdisho, balse heshiis walba la marsiin doono hab sharci ah
Wasiirka wuxuu sidoo kale sheegay inaan la saxiixi doonin heshiis aan la isku raacsaneyn, maadaama ay dhibaatooyin badan ka imaan karaan. Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa dhawaan shaaciyay inay xog ku heleen in DFS ay heshiis Shidaal qodis ah la galeyso shir kadaha Liberty Petroleum iyo Coastline, taas oo culeys uu ku noqonayo howlaha deynta Cafinta Soomaaliya ee socda.
Gaadiid farabadan oo ku xayiran wadada xiriirisa Afgooye & Baydhabo
Waxaa Maalintii 3aad Gaadiid farabadan oo nooca xamuulka qaadi ah oo ku dhow lixdan ay ku xayiran yihiin duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii wa da da lagu gubay lix ga ari oo xa muul ah.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay in gaadiid ka ay wada da u galeen, isla mar kaana dab ay ku qabad si iye en meel u dhow xerada Ciida mada kumaa ndooska Soom aaliya ee DANAB ee Balli-doo gle, xilli ay kusii jeedeen Magaalada Ba ydhabo ee Xarunta gob olka Baay.Qaar kamid ah darawalada Gaa diidka oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in Gaadiidkooda ay Canshuurtii lagu lahaa siiyeen DFS & Ma amulka K/Galbeed, isla mark aana ay la’yihiin in si amni ah ay ku mar aan wa dada xiriirisa Muqdisho & Baydhabo.
Waxaa ay ugu baaqeen Madaxweyne Max amed C/hi Farmaajo iyo Madaxda K/Galbeed in ay si deg deg ah wax uga qabtaan xaalada am ni darro ee kajirta wadada, hadii kale ay Shaqa joojin ku sameyn doonaan.Wadada u dhaxeysa degmada Afgooye ee G/Sh/Hoose & M/Baydh abo ee Xarunta G/ Baay ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal amni darro, waxaana wala ac ka muujiyay Darawal ada Gaadiidka iyo dad ka ku safra.
Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle oo kulan yeeshay
Baarlamaanka D/G/Hir-Shabeelle oo ku gu da Jira Kalfadhiga 1aad ayaa Fadhigiisa 15 kuyee shay Caasimada Hir-Shabelle ee M/ jowhar Kul anka oo uu shir Gudoominayey Kusimaha G/ B/ ahna G/kuxigenka 1aad Siraaji Sh .Isxaaq ayaa Aje ndahiihu ahaa sii wadida Akhrinta Xeer Hoosadka Ba arlamaanka,iyada oo Xogha yaha Guud ee Gola ha Cabdiwaxiid Maxamed Xuse en (Wadaariyad) uu Xildhibaanada ka hor Akhriy ey dhamaan cutubyada Xe er Hoosadka B/D/G/ Hirshabelle Xildhibaanada ayaa soo jee diyey in Xeer Hoosadka lagu dhaqmo si sha qada Baarla manka u noqoto mid hufan oo si ha bsi leh Ugu dambeyn Kusimaha G/B/ahna G/ kuxigeenka 1a ad Md Siraaji ayaa soo xiray Fa dhiga isagoo xil dhibaanada ku wargeliyey in akhrinta Xeer Hoo sadka ay soo gabogabowday
Musharax Daahir Geelle & RW Rooble oo kulan yeeshay
R/Wasaaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Roo ble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Guddoomiyaha Xisbiga Dan Qaran ahna Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya.
Kulankaan oo kamid ahaa kulamada uu R/Wasaaraha la qaadanayay Xubnaha Musha rixiinta Madaxweynaha ayaa waxaa ay isku dhaafsadeen aragtiyo kala duwan oo la xiriira Arrimaha doorashooyinka dalka.
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in R/Wasaaraha ay is dha afsadeen aragtiyo ku Aadan marxaladda kala guu rka xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo sida lo oga gudbi karo.
Waxaa sidoo kale uu sheegay Md. Daahir Gee lle in R/W/Rooble ay is dhaafsadeen aragtiyo aad u kala durugsan dowladda aragtideena uu u soo gudbiyay R/Wasaaraha halka dhankiisana uu u gudbiyay aragtida Musharixiinta ee ka gudbida Arrimaha taagan.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inay ka go ’an tahay inay tagaan goob kasta oo looga gudbi karo marxaladda lagu jiro, waxaana uu cadeeyay in cidkasta oo maareyn karta ay goobteeda ugu tegi doonaan. Md.Daahir Maxamuud Geelle ayaa kamid ah Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ee dhaliil san sida XFS u wajaheyso Arrimaha doorashada, waxaana uu dhowr jeer uu ku baaqay in xal laga gaaro khilaafka doorasho oyinka.
RW Roooo la kulmay Haweenka kujira labada Aqal kana hadlay…
RWasaaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Roob le oo kulan la qaatay haweenka 2da Aqal ee Ba arlamaanka Soomaaliya oo ay hoggaamineyso Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xaquuqda Aadanaha ayaa sheegay in DS ay ka go’an tahay sidii loo Xaqiijin lahaa qoondada 30% ee Haween ku ay ku leeyihiin Golayaasha Qaranka.
R/Wasaare Rooble ayaa ku am maanay haw eenka Soomaaliye ed kaalinta muuqata ee ay ku leeyihiin horumarinta bulshada, gaar ahaan xiliy adii adkaa iyo hadda oo dalku dib uga soo kab anayo.
Haweenka Soomaaliyeed oo qaba walaac ku addan lacagta isdiiwaan gelinta musharaxiinta u tartamaya kur aasta goleyaasha oo ka badan tii sanadkii hore ay uu Ra’iisul Wasaaruhu u cadde eyey in dadaal dheeri ah uu ku bixin doonno sidii arrintaa xal loogu heli lahaa.
Wasiirka Haweenka iyo Xaquuqul Insaanka Mar wo Xaniifa Ibraahim Xaabsade ayaa tilmaamatay in haweenku ay helaan matalaad siyaasadeed oo muuqata ay tahay mid ka timid bulshada Sooma aliyeed dhexdeeda, iyadoo taas laga duulayana ay u howlgeli doonaan sidii loo xaqiijin lahaa kur aasta haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin Go leyaasha dowladda, waxayna uga mahadcelisay R/l Wasaaraha xaqiijinta qoondada haweenka.
Xasan Sheekh oo si adag uga hadlay go’aan kii Shalay farriin culusna diray
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Md.Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay shir jaraa’id oo ay Xalay qabteen midowga mu sharaxiinta ayaa si kulul uga hadlay go’aankii Shalay ka soo baxay XFS & qaar ka mid ah mad axda dowlad goboleedyada dalka.
Md.Xasan Sh.ayaa sheegay in madaxdii dowlad goboleedyada ee Shalay garab taagnaa ra’iisul wasa araha aysan go’aankaas ku metelin dadkii iyo gobolladii loo doortay.
"Doorashada lagu dhawaaqay in la qabto su urta gal maaha oo midnimada dalkan ayey dhaa wacee, walaaleheena uu ra’iisul wasaaruhu u we ynaa ee Shalay isla taagnaa, sida ay u dhaqme en sax maaha, madaxdii qaar ayaa maqan oo la leyahay waa laga tashanaa, kuwa kale ee Shalaymeesha taagnaana kuma metelaan dadkii Dorraad doortay,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Waxa uu sheegay in madaxda dowlad gobole edyada Galmudug, K/Galbeed iyo HirShabeelle aan laga yeeleyn qorshahooda ah "Madaxweyna ha ayaan kursiga u soo boobeynaa oo dadka ana gaa soo gacan maroojineyna, taasi sax ma’ahan” ayuu yiri.
"Madaxweynaha waxaan leenahay dalka inaad tiraahdo qaar waa laga maarmaa, qaarna ciidamo ayaan geysanaa oo xoog dadka iigu soo afduuba, nimankii loo doortay deegaanadaasna ay raali ku yihiin, dadka ka soo jeeda dowlad goboleedyada as raali kama ahan arrintaas,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Xasan Sheekh.
Sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tah ay isku celinta dadkan Soomaaliyeed ee ka soo daalay kala fogaanshaha iyo kala shakiga, isla markaana madaxweynaha laga rabo in hadii uu xukunka sii joogayo uu dadka Soomaaliyeed isku haayo, haddii uusan sii joogina dadkii oo is heysta oo aan kala maqneyn uu wareejiyo.
"Aamusnaanta madaxda maamulladii Shalay meesha joogay waxaa u arkeynaa inay dhaheen hanaloo keeno ciidamo aan doorashada ku dhac no madaxweynuhuna uu sidaas rabo, marka taasi waa khatar, midnimada dalka ayaa khatar ku jirta Shalay,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Guddoomiyaha G/Sh/Hoose oo Guddi u saaray Colaadda Walanweyn
Guddoomiyaha G/Sh/Hoose Md.Cabdiqa adir Maxamed Nuur Siidii ayaa magacaabay Gu ddi xaqiiqo raadin ah oo ka tirsan maamulka G/Sh/Hoo se Gogol xaarna u ah Nabadda deg mada Wanlaweyn.
Guddigaan oo uu Magacaabay G/G/Sh/Hoose ayaa waxaa gu ddoomiye looga dhigay Yaasiin Maxame Bahsiir halka guddoo miye kuxigeen looga dhigay Cabdirisaq xasan Gaaboow.
Xubnaha guddiga oo ka kooban 2 Xubnood ayaa dhawaan tegi doona degmada walanweyn, waxaana Shaqadooda ay tahay inay gogol Na badeed u dhigaan beelaha dagaalamay, waxaa na la faray inay gutaan waajibaadkooda shaqo.
Degmada Walanweyn ee G/Sh/Hoose ayaa waxaa kusoo laab laabtay Colaad beeleedyada, iyada oo coladaas ay saameysay dadka ku nool D/walanweyn iyo degaanka yaaq-Bariwey ne iyo degaano kale.Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo diyaarado ku geysay Beledweyne
Wararka naga soo gaaraya M/Beledweyne ee Xarunta G/Hiiraan ayaa waxaa ay sheegaya an in DFS 3 diyaaradood oo sida Ciidamo farab adan ka dejisay Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne.
Diyaaradaha oo sida Ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa laga qaaday M/Muqdisho, iyada oo garoonka di yaaradaha Beledweyne ay kusoo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan CBS.
Hadal-heyn badan ayay dhalisay Ciidamada ay Shalay DFS diyaaradaha ku geysay M/ Bele dweyne, iyada oo laamaha amniga DFS & ku wa Hir-Shabeelle aysan faah faahin sababta ka dambeeysa.
Duleedka M/Beledweyne ee G/Hiiraan ayaa waxaa ku sugan Maleeshiyaad uu hoggaamin ayo Janeraal Xuud oo kasoo horjeeda qaabkii loo dhisay Maamulka cusub ee Hir-shabeelle, iy aga oo dhowr jeer diiday in Madaxweynaha Cus ub ee Hir-Shabeelle Cali guudlaawe Xuseen in uu ka dego M/Beledweyne, isla markaana Bele dweyne ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeday Maamulka Hir-Shabeelle.
Sidoo kale Beledweyne ayaa waxaa ay kamid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka Xildhibaannada 2da Aqal ee BFS, iyada oo maalmihii la soo dhaafay Beledw eyne & Jowhar ay ka dhacayeen howlgallo amn iga lagu xaqiijinayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay waxaa ay Ciidamo diyaarado ku geysay Magaaloyinka G/Gedo, iyaga oo la wareegay degmooyinka ay gacanta ku hayeen Ciidamada jubbaland, halka M/dhuusamareeb Ciidamadii la geeyay ay mee sha ka saareen Maamulkii Ahlusunna ee kasoo horjeeday qaabkii loo dhisay M/Mulka gamudug.
Lama Oga tallaabada ay qaadi doonaan Cii damada Haramcad oo ay Shalay DFS ka dejis ay M/Beledweyne, waxaana wararka aan heln ay ay sheegayaan in maalmaha soo socda Ciid amo kale ay dowladda geyn doonto M/ Beledw eyne. Xigasho:-radorisaala.com
Dagaal beeleed culus oo Shalayta dib uga qarxay Miyiga degmada Isku-shuban
Dagaal culus oo u dhexeeya 2beelood, ayaa mar kale Shalayta dib uga qarxay miyiga degm ada Isku-shuban ee G/Bari, kadib mudda koob an oo uu istaagay.
Dagaalka oo ku salaysan muran ka dhashay degaamaynta miyiga Isku-shuban, ayaa Shalay ka bilowday halkaas, waxaana ka dhashay khas aare dhimasho iyo dhaawac kala duwan.
Gurmad xooggan oo ka socda labada dhin ac, ayaa duhurnimadii Shalay gaaray dhulka la gu dagaallamay, taas oo keentay in uu dib u qar xo dagaalkaas.
Inta la xaqiijiyay, waxa ilaa iyo hadda daga alka u dhintay lix qof oo labada dhinac ah, wax aana ku dhaawacmay in ka badan 13 ruux, in kastoo aan weli xog rasmiya laga helin.
Shirkadda Twitter ayaa sababo laxariira ku xa dgudubka xeerarka shirkadda u hakisay akoon kii ololaha doorashada Madaxw eynaha Mareyk anka Donald Tr ump kadib markii mareegta ol ol aha Trump lasoo galiyay sawirka astaanta shir kadda, oo uu lagu dahaaray, calanka shuuci yad da.
Mar sii horreysay, shirkadda a yaa xirtay akoon ka gaarka ah ee madaxweyne Trump, waa na markii ugu horreysay ee ay shirkadu mamn uucdo koonta da madaxweyne wadd an. Koo nta da Trump ayaa la hayd in ka badan 88 milyan oo qof oo raacsan,
xayiraadda waxay ka dhigantahay aamusinta trump maalmahiisa ugu danbeeyay ee ka hor dhammaadka xilligiisa. Talaabadan ayaa timid kadib sanado badan oo muran uu ka taagnaa si da shirkadaha baraha bulshada ay u maareeya an akoonada hogaamiyaasha aduunka ee awo oda badan.
Trump ayaa si isdaba joog ah u isticmaalyay Twitter-ka si uu u cadeeyo in guuldaradiisiii ​​do orashadii 3-dii Nofeembar ay sabab u tahay mu suqmaasuq baahsan, isaga oo taageerayaash iisa ku booriyay inay yimaadaan Washington Ar bacadii hore soona buuxdhafiyaan aqalka Cong ress-ka ee Capitol Hill si ay uga mudaahar aadaan natiijada doorashada COVID-19 OO KU SII LABA LIXAADSANAYA ITOOBIYA
Wasaaradda caafimaadka Dalka Itoobiya ayaa sheegtay in maalintii Ji mcaha oo qudha ay diiwaangelisay 345 kiis oo cusub oo xanuunka COVI D-19 ah. Wasaaradda ayaa sheegtay in tiradaas ay diiwaangelisay muu do ku siman 24 saacadood taasoo wadarta guud ee dad ka qaba xanuunka ee dalkaas ka dhigaysa 127,572 oo qof.
Tirada dadka Xanuunka Korona ugu Geeriyooday aya a iyana tiradooda lagu sheegay 1,974 qof. Itoo biya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayay ku noolyihiin dadka lagu qiyaaso 114 Milyan oo qof sidoo kale Itoobiya ayaa laga diiwa angeliyay tirada ugu badan ee kiisaska xanuunka Covi19 ee gobolka Bariga Afrika.
Dhanka kale Eretrea oo la deris ah dalka Itoobiya ayaa Jimcihii iyana diiwaan gelisay 111 kiis cusub oo xanuunka Koofid ah sida ay ku warran tay wasaardda caafimaadka ee dalkaas taas oo wadarta guud ee bukaan nada qaba xanuun ka Korona ee dalkaas ka dhigeysa 1, 516 qof halka 803 kalena ay ka soo kabteen xanuunka.
DRC: ASKAR LALA XIRIIRINAYAY DILKA MADAXWEYNE HORE OO XABSIGA LAGA SII DAAYAY
Dowladda Dimoqraadiga Kongo ayaa xabsiga ka sii deysay 23 askari oo loo heystay inay ku lug lahaayeen dilka madaxweynihii hore ee dalk aas Laurent Kabila.
Askartan ayaa tuhumada dilkaas awgiis xabsiga ku jirtay ku dhawaad labaatan sano. Askarta ayaa xabsiga laga sii daayay kaddib markii la shaaciyay cafis ka soo baxay xafiiska madaxwey naha haatan haya talada dalkaas ee Félix Tshisekedi. Lau rent Kabila oo ahaa madaxweynihii dalka Koongo ayaa sa naddii 2001-dii geeriyooday kaddib markii uu toogtay mid ka mid ahaa ilaaladiisii gaarka ahayd.
Dilka madaxweynaha ka dib maxkamadda ciidamada milatariga ayaa xabsiga u taxaabtay tobaneeyo ka mid ah askarta.
Qaar kamid ah kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa camb aareeyay tallaabada ay maxkamaddu ku xirxirtay askartaas iyada oo 11 ka mid ah askartii loo xiray tuhumadaas ay geeriyoodeen muddadii ay ku jireen xabsiga.
Dadweynaha dalka Koongada Dimoqraadiga qaarkood ayaa rumay san in xadhigga askartaasi ahaa mid raad gadasho ah oo lagu marin hab aabinayay ra’yul caamka dadweynaha.
Dadka qaarkii ayaa aaminsan in amarka dilka madaxweynaha ay ku lug lahaayeen awoodo dibadda ah maadaama uu ku soo beegmay xilli uu jiray muran Koongo kala dhexeeyay qaar ka mid ah dalalka la deriska ah.
QARAAR XILKA LOOGA QAADAYO TRUMP OO LA FAAFIYAY
Xubnaha Xisbiga Dimuqraadiga ee Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa faafiyey qaraar qa byo qoraal cusub oo xil ka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne Trump. Xisbiga ayaa ku eedey neya madaxweynaha xilka ka degaya danbiyo waaweyn iyo dambiyo fudud, oo ay kujirto kicin ta kacdoon shacab. Afhayeenka aqalka conger ss-ka Nancy Pelosi ayaa sheegtay iney sii wadi doonto ololaha xil ka xayubinta Trump haddii uu madaxwyenaha si dhakhsiyaha isku casili wayo.
Trump ayaa lagu wadaa inuu xafiiska ka tago 12 Maalmood guduhood. Afhayeen u hadlay Aqalka Cad ayaa sheegay in xil ka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha ka hor xilligii loo astee yay ay sii kala qeybineyso dalka.
Mid ka mid ah xubnaha sare ee golaha wasii rrada Mareykanka ee u dhowaa madaxweynaha ayaa ku biirtay liiska dadkii dhowaan is casilay, sababo la xiriira khudbaddii uu madaxweynuhu u jeediyay dibadbaxayaasha kahor intaysan weerar ku qaadin kongareeska. Xoghayaha waxbarashada, Betsy DeVos ayaa sheegtay in laga habboonaa wixii dhacay Arbacadii. Hoggaamiyeyaasha dalalka caalam ka ayaa canbaareeyay qalalaasihii ka dhacay M/Washington ka dib markii taageerayaasha ma daxweyne Donald Trump ay weerar ku qaadeen xarunta Capitol ee farisinka u ah D/Mareykanka.
Rabshadaha ayaa kallifay in la hakiyo kulan uu golaha wakiillada ka lahaa ansixinta guushii Joe Biden.
MAXAAD KA OGTAHAY CANUGGA UGU TAAJIRSAN DUNIDA?
Ryan Kaji oo ah ilma sagaal sano jir ah oo ku nool gobolka Texas dalka Mareykanka ayaa noqday qofkii lacagta ugu badneyd ka hela shirkadda muuqaalada ee Youtube sanadkii lasoo dhaafay ee 2020-ka.
Ryan oo ay gacanta ku hayaan waalidiintiisa ayaa lacagta ka hela muuqaalada caruurta ay daaw adaan ee Cartoons loo yaqaano, halkaas oo uu soo dhigo muuqaalo madadaalo iyo kuwa kale oo ay caruurta ku maadeystaan, kana daawadan barta uu Youtube ku leeyahay.
Jariiradda Forbes ee wax ka qorta dadki maalqabaneeda adduunka ayaa Ryan sanadkii lasoo dhafay ku qiimeysay in uu yahay qofka lacagta u gu badan ka helay Youtube ka sanadkii tegay.
Lacag ku dhaw 30 milyan oo doollar ayuu sanadkii tegay ka helay You tube, waxaana sidookale uu lacago kale ka helaa shirkadaha sameeya qal abka caruurta lagu ciyaarsiiyo. Alaabaha ay soo saaraan shirkadahaas ayaa lagu xardhaa sawiradiisa, si loogu suuq geeyo, caruurtana ay u iibsadan.
Sanadkii lasoo dhaafay oo keliya, Ryan waxaa uu sameeyay lacag dhan 230 milyan oo doollar, kuwaas oo uu ka sameeyay xayaysiinta iyo muuq aalada barta uu ku leeyahay Youtube. Sanadkii tegay ee 2020-ka, muuqaaladiisa waxaa daawatay 12.2 bilyan oo qof, kuwaas oo ay u badan tahay in marar badan la daawaday ama car uurta ay marar badan dib u daawadeen, maadaama dadka dunida ku nool oo dhan aanay intaas gaareyn, kuwa badan oo kamid ahna aysan daawanin muuqaaladiisa. Waxaa uu barta Youtube ku leeyahay ku taxan inkabadan 40 milyan oo qof oo ku xiran akoonkiisa, kuwaas oo u badan caruur, maadaama muuqaa ladiisa ay yihiin kuwa la xiriira madadaalada caruurta. Ryan Kaji ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay canug yar oo saameyn bad an ku leh caruurta ku nool dalalka horumaray, waxaan muuqaalkiisa ugu daawshada badan uu gaaray 2 bilyan oo qof. Labadii sano ee lasoo dhaafay, Ryan waxaa uu sidookale ahaa qofkii ugu mushaarka badnaa ee shirkadda Youtube. Tan iyo markii uu Ryan asaa say bartiisa Youtube- ka, sanadkii 2015, waxaa muuqaaldiisa daawatay bal aay iin qof.
Mar ay warbaahinta NBC ee dalka Mareykanka Ryan wax ka weydiisay sababta ay caruurta u jecel yihiin daawashada muuqaaladiisa ayaa waxaa uu ku jawaabay "waan madadaaliyaa, waxaana ahay shactiroole".
Jariiradda Forbes ayaa kusoo warrantay in hal milyan oo kamid ah 22-ka milyan ee kamidka ah lacagtiisa uu ka sameeyo xayaysiinta uu sameeyo.
Ryan walaashii oo ay mataano yihiin kama marna muuqaalada oo waxay walaalkeed la sameysaa muuqaalada lasoo geliyo bartiisa Youtube-ka. Ryan oo wali caruur ah ayaa 15 boqolkiiba dakhliga uu soo xareeyo waxaa loogu shubaa akoon bangi, sii uu ugu noolaado marka uu weynaado.
Waalidiinta dhalay Ryan ayaa lagu kala magacaabaa Loann Kaji iyo
Shion Kaji. Ryan waxaa la sheegaa in uu leeyahay dad la shaqeeyo, kuw
aas oo ay kamid yihiin kuwa muuqaalada u duuba
TRUMP OO KU DHAWAAQAY GO’AAN LA XIRIIRA XAFLADDA CALEEMO SAARKA JOE BIDEN
Madaxweynaha xilka ka degaya ee Donald Trump ayaa sheegay in uusan ka qeybgali doo nin xafladda caleemo saarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo dhici doonta sida uu qorshuhu yahay 20 bishan Janaayo.
Hadalkan ayuu ku soo qorey bartiisa Twit ter ka dib markii xay iraadda laga qaaday.
"Dhammaan kuwa iga codsaday, kama qeybg
ali doono xafladda cal eemo saarka 20 Janaa yo,” ayuu ku qorey Twitter.
XOG: QOOR QOOR, GUUDLAAWE IYO LAFTA-GAREEN OO XALAY KULMAY IYO SHAKI SOO GALAY
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in xalay kulan saacado qaatay ay hotelka Decale ay ku yeesheen madax weynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle iyo Koonf ur Galbeed.
Kulanka Qoor Qoor, Cali Guudlaawe iyo Cabdi ca siis Lafta-gareen ayaa yi mid saacado kadib mar kii ra’iisul wasaare Roo ble, oo ay garab taagan yihiin saddexdan madax weeyne goboleed, uu ku dhowaaqay in dalka uu galayo doorasho hal dhi nac ah.
Xubno ku dhow saddexda madaxweyne goboleed ayaa Caasimada Online u sheegay inay shaki badan ka qabaan go’aankii ay habeen hore qeybta ka ahaayeen ee lagu garaay in doorasho la qabto, islamarkaana ay doonayaan in xal la raadiyo.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in sidoo kale ay doonayaan in marka hore ay kulamo la yeeshaan musharaxiinta mucaaradka, si gaar ahna madaxweynayaasha HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa arrintan aad u doonaya.
Qoor Qoor ayaa sumcaddiisa dilay markii uu ka been sheegay mucaaradka, isaga oo ku eedeeyey inaysan usoo gudbin jawaab uu ka sugayey, halka jawaabta isaga laga sugayey.
Cali Guudlaawe iyo Lafta-gareen ayaa rumeysan inaysan arrin wana agsan u muuqan inay go’aan qaataan ayaga oo aan la hadlin mucaarad ka. Guudlaawe, waxaa la doortay un laba bil ka hor, oo ma helin fursad uu kula kulmo mucaaradka, halka Lafta-gareen, inkasta oo uu aad ugu xiran yahay Villa Somalia uu doonayo inuu ugu yaraan isu muujiyo mas ’uul xal raadinaya.
Illaa iyo hadda ma cadda tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan sad exdan madaxweeyne goboleed.Xigasho:caasimadda.net
Dad Soomaali Ah Oo Ku Xayiran Gudaha Magaalada Nairobi
Dad badan oo shacab Soomaaliyeed ayaa xiligaan ku xayiran Maga alada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya, kuwaasi oo doonayay inay dib ugu soo laabtaan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka.
Qaar kamid ah dadka ku xayiran Kenya oo la hadlay BBC-da ay aa u sheegay in aysan furneyn Safaaradii dowladda Soomaaliya ku lah eyd Nairobi, isla markaana ay waayeen meel ka qaatan Viisaha iyo Duk umiintiyo kale oo ay u baahan yihiin.
Mid kamid ah dadkaas xayiran ayaa tilmaamay inay dhibaato heysato oo u baahan yahay inuu dib ugu soo laabto Muqdisho, wuxuuna cadd eeyay in uusan jirin meel ay kala xiriiran dowladda Soomaaliya, maa daama loo sheegay in Hooyadii ay xanuunsan tahay.
Khilaafkii diblomaasiyadeed ee soo kala dhex-galay dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayey dadka sheegeen inuu saameyn ku yeeshay, iyagoona tilmaamay in xiligaan ay ku adeg tahay inay kusoo baxaan safar dhinaca dhulka ah.
Dowladda ayaa xiriirka u jartay Kenya, waxaana dowladda ay Saf iirkii Soomaaliya u joogay Magaalada Nairobi iyo shaqaalihii Safaaradda ku amartay inay dalka dib ugu soo laabtan, isla markaana la xiro Xarunta Safaaradda, halka Safiirkii uu dalkiisa ku laabtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeeysay inay fara-gelin ku heysato arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan Maamulka Jubbaland, waxaana heshiis dhexmaray labada dowladooda lagu amray inay dib u soo celiyaan xiriirkii ka dhexeeyay.
BURBURKA DIYAARADII LAGU LA’AA INDONESIA OO LA HELAY
Diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Indone sia oo ay la socdeen 62 qof ayaa ku dhacday ba dda markii ay ka kacday caasimada Jakarta, sida ay masuuliyiintu sheegeen Shalay oo Sabti ah.
Wasiirka Gaadiidka ee dalka Budi Karya Suma di ayaa sheegay in diyaaradda Sriwijaya Air ee SJY 182 wax aa saarnaa 50 raka ab ah, oo ay ku jiraan 10 caruur ah, iyo 12 shaqaale ah, waxaana mark aasi ka dib ciidamada Badda iyo laamaha gu rmadku u hawlgaleen inay raadiyaan diyaaraddaCiidanka Badda Indonesia ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda oo ku kala firirsanaa 4goobood oo ku yaal biyaha Badda Java, waxa ana ay sheegeen in cimiladu aad u liidato aagga diyaaraddu ku dhacday.
Wakaaladda raadinta iyo samatabbixinta Qar anka ayaa sheegtay in goobta ay diyaaradda ku dhacday ay qiyaastii 1.5-2 mayl u jirto labada jas iiradood, ilaa iyo hadda ma soo bixin faah faahin ku saabsan dadkii saarnaa diyaaradda.
Diyaaradda ayaa ka baxday caasimadda Jak arta, waxaana ay ku sii jeeday Pontianak, oo ah caasimada gobolka West Kalimantan, waxaana ay lumisay khadka isgaarsiinta wax yar ka dib markii garoonka ay ka duushay, markaas oo saa caddu ahayd 2.40 pm. waqtiga maxalliga ah (0740GMT), ayey sheegtay afhayeenka W/ Gaad iidka Adita Irawat
Jose Mourinho ayaa sheegay in "wax qars oodi ah” aysan aheyn gu usha uu ka gaaray Car abao Cup, laakiin wuxuu qirtay inuu aaminsan ya h ay in Tottenham ay lee dahay hal ujeedo oo u horseedeysa koobab.
Mourinho iyo Spurs ayaa boos ka ballansad ay finalka League Cup Habeen hore, iyagoo Br entford 2-0 si ay boos uga kaga badiyay W em bley. Halkaas waxay ku wajihi doonaan midkoodna Man chester United ama Manchest er City bisha Abriil, iyadoo Mo urinho uu isku dayi doono inuu gacanta ku dhigo Carabao Cup markii afaraad.Wuxuu seddex jeer kula guuleys tay Chel sea iyo Manchester United. markan, wuxuu rumeysan yahay inuu markale sameyn karo tii oo kale. Inkastoo uusan ka dhigin wax qarsoodi ah baa hida uu u qabo Carabao Cup, Mourinho ayaa sheegay inay jirto hal fure oo koobabka ay ku qadi karaan kooxdiisa.
"Ma jirto wax qarsoodi ah. Waxaan imid Eng land 2004tii waxaan xas uustaa in mudadaas bartay macnaha koobabka halkaan mar walbana wa xaan u joogo guul,” ayuu yiri ciyaarta ka dib. "Haddii uu jiro wax sir ah, waa in si dhab ah loo qaadaa, in la ixtiraamo waxa kubada cagta Ingariis ka ay tahay ayaa muhiim ah, waxa kooxaha Ingariiska ay yihiin ayaa muhi im ah. Spurs ayaa raadineysa inay soo afjarto 13 sano oo koob la’aan ah, iyadoo aan wax koob ah ku guuleysan tan &2008